Email Productivity: Desktọpụ Email ahịa
Bọchị ndị a, ọ dị ka onye ọ bụla na-eji ndị ahịa email sitere na weebụ. Ọnụ ọgụgụ dị n'azụ omume a na-atụ egwu. Laa azụ mgbe Microsoft lere anya n'ịzụ Hotmail ọ nweela Nde ndị debanyere aha 8.5—Na nke ahụ dị na 1997. Taa, ọrụ email email dị iche iche Microsoft ka dị Ndị ọrụ 250 nde, na Gmail na-emechi ihe dị ka nde mmadụ 150. Ozi ntanetị nwere ike ịbụ otu n'ime usoro ndị ama ama na otu nnukwu ojiji nke teknụzụ weebụ.
Nanị nsogbu bụ na ozi ntanetị dị na ntanetị adabaghị adaba. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịmị mkpụrụ karịa ọkara ijeri mmadụ ndị na-eji ozi ịntanetị, weghaara onye ahịa email desktọọpụ. Nke a bụ ihe kpatara ya:
Ọtụtụ n'ime anyị ugbu a kwesịrị ịhazi ọtụtụ narị ozi otu ụbọchị. Oge ọ bụla ị na-emeso ozi na mmemme email dabere na weebụ, ị ga-echere ụfọdụ sava weebụ dị anya iji jikwaa arịrịọ gị. O nwere ike ịdị ka Hotmail mara mma nke ọma na ihichapụ ozi, mana ọ fọrọ nke nta ka ọ ọsọ ọsọ dị ka ime nke a na Outlook ma ọ bụ Thunderbird ma ọ bụ Mail.App. Ihe mgbakwunye ọkara-nke ọ bụla nwere ike ọ gaghị eyi ka ọ dị ukwuu, mana ọ bụrụ na ị na-emeso ọtụtụ puku clicks ị na-efu ọtụtụ nkeji. Ọzọkwa, mkpokọta ọsọ nke onye ahịa email gị dabere na kọmputa gị kama njikọ Internetntanetị gị. Isi maka ebe jupụtara na wifi hotspot na ọbụlagodi Gmail jiri nwayọọ nwayọọ na-ari ari.
Ihe bụ isi dị iche na ozi email na ntanetịime ya bụ usoro nke usoro uzo. Ọ bụrụ na ịgbakwunye otu faịlụ na ozi na Yahoo! Mail, ị ga-echere ruo mgbe bulite usoro zuru ezu tupu ị n'ezie nwere ike izipu ozi. Nke a bụ naanị ọdịdị nke ozi ịntanetị sitere na weebụ. Ngwa ahụ na-aga na weebụ, yabụ na ịnweghị ike ịme ihe ọ bụla site na idepụta ederede ruo mgbe ebufere ọdịnaya gị niile na .ntanetị.
Tinye faịlụ na ozi na mmemme email desktọọpụ gị, agbanyeghị, usoro a bụ ozugbo. Ọ baghị uru ma ọ bụrụ na faịlụ a bụ 1k ma ọ bụ 10MB. Ọ baghị uru ma ọ bụrụ na ị nọ na njikọta ọnyà ma ọ bụ nke na-egbu oge nwayọ. N'ezie, ịkwesighi ịnọ n'ịntanetị iji dee ozi ịntanetị, tinye mgbakwunye, ma kwụ n'ahịrị maka izipu ha! Email desktọọpụ gị na-arụ ọrụ dịka ozi nzipu ozi ọdịnala. Can nwere ike ịhazi ozi mgbe ọ bụla masịrị gị na ebe ọ bụla ịchọrọ, n'agbanyeghị agbanyeghị nso gị na ndị na-ebu ozi.
O yiri ka email-weebụ ọ ga-emeri na njirimara ahụ. A sị ka e kwuwe, ịnwere ike ịgbakwunye koodu ọhụrụ na ngwa ahụ n'achọghị ka ndị ọrụ budata ihe ọ bụla. N'ezie, ndị na-eweta email na-ekwupụta ihe ọhụụ ọhụụ. Blog Google Na nso nso a mara ọkwa na ọ bụrụ na ị na-eji ihe nchọgharị Google Chrome ị nwere ike ịdọrọ-na-dobe mgbakwunye na desktọpụ gị!
Chere: dọrọ na dobe mgbakwunye? Ka anyị hụ, nke ahụ dị na desktọọpụ email ahịa ebe ọ dịkarịa ala 1997. Na-ekwu okwu banyere Google, ha na-egosi na ọ bụ naanị web-dabeere na ahịa ahịa na eze nyere "offline ojiji" maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu afọ zuru ezu.. Nke ahụ bụ akụkụ nke abụwo akụkụ nke onye ahịa ọ bụla nwere desktọọpụ sitere na kemgbe afọ 1979. Ndo, web-based email fans. Not naghị emeri agbụrụ agbụrụ.
Kpọọ m onye mkparị, mana enweghị m mmasị n'echiche nke ịtụkwasị email m niile obi na igwe ojii site na ụfọdụ ndị na-eweta ọrụ n'efu. N'otu oge ọdachi adakwasị ha. Site na ndị ahịa desktọọpụ-email, ị ga-enweta ma ọ dịkarịa ala akwụkwọ abụọ nke ozi gị na-akpaghị aka. A na-echekwa otu nnomi n'ịntanetị, a na-emekọrịta ọzọ na ndị ahịa desktọọpụ gị. Ọ bụrụ na ị nwere otutu kọmputa (na m chere ọtụtụ n'ime Martech Zone ndị na-agụ ya) na-akpaghị aka ị nwere ọtụtụ akwụkwọ.
Naanị Otu Na-adọghachi (ma ọ bụghị n'ezie)
Enwere otu mpaghara ebe onye ahịa weebụ na-ezigara weebụ dị mma karịa onye ahịa akwụkwọ ozi desktọọpụ: iji komputa agbaziri ego. Ọ bụrụ n ’ị nwere ike ịnweta igwe ọzọ ma chọọ ịlele email gị, ọ na-enye aka dị ukwuu inwe ike ịwụli na ihe nchọgharị ma lee ọsọ ọsọ.
Agbanyeghị, nke a abụghị ezigbo nsogbu ma ọ bụrụ na ị hazie onye ahịa email desktọọpụ gị nke ọma. Nwere ike ịgafe ozi site na onye na-eweta weebụ na-akwụghị ụgwọ iji hụ na ọ bụrụ na ị ga-enwerịrị nnweta web, ị nwere ike nweta ya.
Ọ bụrụ na Desktọpụ Email Dị Oké…
Gini mere mmadu nile adighi eji ya? Ozizi m bụ na ọ na-ewe obere mbọ. N'agbanyeghị na ha abụọ Zimbra na Thunderbird na Windows Live Mail enwere kpamkpam n'efu, ha na-ewere nkeji ole na ole iji melite. Y’oburu n’icha onye maara gi onye webusaiti mara gi, odika igha agbanwe.
Mana biko, a na m arịọsi unu ike, tulee ịmafe na onye ahịa email desktọọpụ. You'll ga-ahụ ịrị elu dị egwu na email arụpụtaghị. Jiri ngwaọrụ ndị mere ka ọ dị mfe iji nweta ihe.
Tags: desktọọpụemail desktọọpụGmailele ihe anyaele ihe anya na gmailarụpụtaghịozi-e web-based email
Aug 16, 2010 na 12:25 PM
Agaghị m ekwenye n'otu isi okwu, @robbyslaughter, ma rụọ ụka ọzọ. Ọ na - ewekarị obere oge maka onye ahịa weebụ iji nweta email karịa ka ọ na-eme maka onye ahịa desktọọpụ. Imirikiti ndị ọrụ anaghị anọdụ na nnukwu akụrụngwa bandwidth, mana ndị ahịa weebụ na-eme!
Onye ahịa weebụ maka ngwa Google dị ọtụtụ, dị ọsọ ọsọ na ịchọ email karịa onye ọrụ desktọọpụ n'ihi ụzọ edepụtara data na ike nke sava ahụ ọ nọ ọdụ. Ọ bụrụ na m na-achọ desktọọpụ m, ọ ga-ewe ọtụtụ sekọnd iji nweta nsonaazụ, mana ngwa Google bụ ozugbo.
Ekwenyere m na paranoia, ọ bụ ezie. Ọ na-amasị m ịnweta email m na enweghị njikọ Internetntanetị.
Aug 16, 2010 na 12:39 PM
N'ụzọ na-akpali mmasị, ọ bụ eziokwu na onye ahịa weebụ nwere ike weghachite ozi ngwa ngwa karịa onye ahịa desktọọpụ, n'ihi na dịka i kwuru, ọ dị na akụrụngwa bandwidth dị elu. Mana ọ ka ga-ezipụ email ahụ nwayọ nwayọ na ihe nchọgharị gị, yabụ m ga-arụ ụka na ọ bụghị ngwa ngwa ọ bụla! (Ọ bụrụ na ihe ọ bụla, ọ ga-abụ nwayọ nwayọ n'ihi ụdị ntanetị niile dị na ya.)
I kwuru eziokwu na nyocha GMa dị ọsọ karịa, sịnụ, Windows Search for Outlook. Nke a bụ n'ihi ngwaike ngwa ngwa, kamakwa n'ihi algorithms ka mma. Aga m arụ ụka na ọ bụrụ na ijikọ ọchụchọ Google na Desktọpụ gị na onye ahịa email mpaghara gị, ọ dị ọsọ karịa Gmail.
Na mgbakwunye, ị ka nwere nsogbu na ozugbo GMail chọtara ozi ọ ga-egosiputara gị maka njikọ nwayọ nwayọ.
Agbanyeghị, ị ka nwere ike nweta ihe kachasị mma nke ụwa abụọ. Ọ bụrụ n'ịchọrọ iwebata igwe ojii iji kweta email anatala, wụlio na ntanetị gị. Y’oburu n’acho iweputa ike komputa nke igwe oji mee ochicho nke ichoro, onye ahia gi gha agha iru ya.
Imeliputa desktọọpụ Desktọpụ, weda ala!
Aug 16, 2010 na 3:09 PM
Yiri Doug ekwerem na ekwenyeghi.
Nke mbu achoro m ikwu na inweta ebe obula, adighi m ele anya dika itinye aka na esemokwu ma obu n'ihi na i ka nwere ike iji webmail mgbe ozo, desktọọpụ anaghị akagbu ya.
Pro desktọọpụ - Enwere m akụkọ 3 m na-enyocha anya na ọtụtụ ndị ọzọ m na-elele site n'oge ụfọdụ. Naanị m na-eji onye desktọọpụ ahịa maka 1 n'ime ha na nke ahụ bụ akaụntụ nke otu ọrụ m ma nke ahụ bụ naanị n'ihi na ọ dị mma na IMAP. Mana ọ bụrụ na ọ bụghị na ọ ga-adị mma ịnwe 3 niile n’otu ebe. M na-eji Thunderbird eme ihe n'oge gara aga na ọ na-arụ ọrụ nke ọma ma ọ dịtụghị mgbe ọ dị mma.
Ọ bụrụ na ị na-emeso ọtụtụ oge / ọnọdụ na-anọghị n'ịntanetị mgbe ahụ ọ dị mma ịnweta email mana maka onwe m, adịkarịghị m enwe njikọ ọ bụla ụfọdụ NA mgbe m bụ ihe ikpeazụ m chọrọ ịme na-agafe email m. Maka ndị njem dị arọ (pre wifi na mbara igwe) nke a ga-abụrịrị ihe dị mkpa, dị ka ịnwe ihe ọ bụla ọzọ na mpaghara ka m nwee ike ịga n'ihu na-arụ ọrụ.
Pro web - Search na-enwu ọkụ na Gmail, MA ndị ọzọ abụghị nnukwu. Otu webmail na-eme nzuzu na nke a na ọtụtụ oge, m ga-agwa mmadụ na m ga-echere ruo mgbe m ga-arụ ọrụ n'echi ya ịchọta ha ụfọdụ email ochie. Mana jiri gmail ọ kachasị ọsọ m hụtụrụla site na ịchọta email maka ihe ọ bụla. Ọ na-atọkwa m ụtọ na nkata m na-eme ugbu a bụ ndị na-enyocha ọchụchọ ahụ mana nke ahụ abụghị n'ezie 100% mkpa.
Ozo m chere na otutu otutu ihe ị na ekwu banyere ya adighi adighi nma. Ọ bụrụ na ị na-ezo aka na nbudata nke JS / HTML na ndị dị otú ahụ na-agba ọsọ na saịtị ahụ, nke ahụ ekwesịghị ịdị na-achọkarị oge ka kọmputa gị ga-agụ ya na nchekwa ma ọ bụrụ na ị nọ na kọmputa onye ọzọ ọ ga-aka njọ iji jide onye na-ahụ maka desktọọpụ 🙂 Ma na-eji ihe atụ webcafe eme ihe, laptọọpụ gị ka ga-enwe ihe ndị webmail dị na oghere ka nke ahụ ghara ịbụ nnukwu nsogbu. Mgbe a bịara n'inweta email ahụ, gmail ga-ezitere gị ụdị nsụgharị (eleghị anya json) maka nnukwu ozi email zuru oke yana isi na ndị dị otú ahụ.
Ọzọkwa onye ahịa desktọọpụ (ikekwe ị nwere ike ịkwụsị ya ime nke a, mana ị gaghị eji egwuregwu mee ihe zuru oke) ga-ebudata mgbakwunye na akpaghị aka, yabụ enwere ike ịkpọchie gị na-echere ihe oyiyi 10 Meg na-esite n'aka ezinụlọ gị mgbe onye gmail ahụ abụghị amanye ijide ya ozugbo ha mepere ma hụ ihe ọ bụ, ha nwere ike ileghara mgbakwunye ahụ anya.
Dịka m kwuru, ana m eji GW desktọọpụ ahịa ahịa ugbu a naanị maka akaụntụ 2 ndị ọzọ na-eji web naanị. M ga-ahụ ụwa ngwakọ n'anya ebe m nwere ike nweta uru nke ha wuru n'ime otu ihe dị mfe iji ndị ahịa mana enwere obi abụọ na ọ ga-abịa n'oge na-adịghị anya. Ya mere maka m Web na-abụkarị nnukwu mmeri ma yie ka ọ ga-adị m mma mgbe niile. Ma dịgasị kwa onye ọrụ.
Echere m na esemokwu ahụ abụghị nke dị n'etiti ngwaahịa ndị ka mma (GMail vs Thunderbird) mana nke n'elu ikpo okwu nwere ikike nka na oru kari ya.
Dịka ọmụmaatụ, ụzọ kachasị ọsọ iji chọọ email gị bụ ntụle mpaghara dị oke mma. N'agbanyeghị ọsọ ọsọ ọrụ ọchụchọ ahụ dị n'igwe ojii, ị ka ga-eche ka ihe nchọgharị gị budata wee mee nsonaazụ ọchụchọ ahụ, wee chere ka ọ budata ma nye email nke ọ bụla. Ihe nchọgharị / njikọ isntanetị dị nwayọ karịa nke dị n'etiti ebe nchekwa gị na draịvụ ike gị, yabụ email desktọọpụ ga-adị elu mgbe niile.
N'ihe banyere ojiji, enwere ọtụtụ ihe ị ga-eme na ngwa desktọọpụ nke ihe na-agba n'ime sandbox nke ihe nchọgharị weebụ. Chọpụta, ihe nchọgharị weebụ na-emewanyewanye kwa ụbọchị. Site na HTML5, enwere ike ịme ihe na ihe nchọgharị ahụ nke ị nwere ike ịme naanị na desktọọpụ na-oh, amaghị m, 1993 ma ọ bụ ya. Chọpụta, ọ dị mma na nke a na-arụ ọrụ na * kọmputa * ọ bụla na-agba nchọgharị gị, mana ọ bụghị dị ka a ga - asị na anyị nwere ọtụtụ ụdị dị iche iche.
Na ngwụsị nke ụbọchị, onye ahịa email desktọọpụ dị ka ịnwe ọbá akwụkwọ nke gị n'ụlọ gị, ebe onye na-azụ ahịa weebụ dị ka ịnwe naanị otu akwụkwọ n'otu oge nke a na-ezipụ akwụkwọ ozi nzi ozi. O doro anya na ọ ga-arụ ọrụ nke ọma n'akụkụ ọ bụla ịnwe onye ahịa email desktọọpụ. Nwere ike “ịlaghachi” na web-ahịa ma ọ bụrụ na ị chọrọ n'ihi na gị na desktọọpụ ahịa software adịghị kemfe, otú ị ka nwere ike nweta ihe kasị mma nke ụwa.
Aug 17, 2010 na 4:35 PM
@robbyslaughter, m na-ekwu maka ikpo okwu ahụ, ekwuru m naanị ngwa ndị m na-eji eme ka o doo anya ma ọ bụrụ na enwere m ike ị nweta njedebe ọ bụla bụ ndị ahịa email desktọọpụ niile edozila ụfọdụ okwu ndị a. Anaghị m atụle ikpe nke aka m dị ka naanị na ndị ọzọ na-eji ihe dị iche iche na ndị ọzọ ga-enwe nsogbu dị iche na m.
Nke mbụ na ọchụchọ, ọ bụghị mgbe niile ka ị ga-adị ngwa na igwe mpaghara, ọ bụ ezie na data dị na mpaghara. Ọ bụrụ na ị nwere gigs nke data (ọkachasị nke ọma jisiri ike data nke anaghị arụ ọrụ nke ọma) ọ bụrụ na ọ bụ ozi ma ọ bụ ihe ọ bụla, naanị n'ihi na ọ bụ mpaghara apụtaghị na kọmputa gị ga-enwe ike ịchọ ya nke ọma karịa otu usoro njikwa nke ọma data na ike nke ọtụtụ ndị n'azụ ya. Njikọ ịntanetị "dị nwayọ" (nke ahụ bụ naanị mgbe ị na-enweta ọnụọgụ data dị ala na naanị ihe ndị ị chọrọ n'oge ahụ) ga-enwe ike inweta gị ihe ịchọrọ, dịka Doug kwukwara na nsonaazụ ya. Ugbu a ị nwechara nsonaazụ ọchụchọ, ee ị na-eweta otu ozi ahụ dị mma, mana mgbe m nwere email ahụ meghere 10 sekọnd gara aga na-etolite onye ahịa weebụ kpatara na desktọọpụ ka na-achọ mgbe ahụ ọ dịghị mkpa nke ahụ.
Mgbe nnukwu mgbakwunye email ahụ batara, ịnwere ike ijikwa ya na ntanetị karịa ka ị na - enweghị ike ibudata ya ma ọ bụrụ na ịchọghị ya n'ezie ebe onye ahịa desktọọpụ mpaghara gị ga - ata ya maka oge na ndị ọzọ ozi agaghị abata n'ihi ya. Enweghi ike ibudata ihe nzuzu ọ bụla mmadụ zitere m bụ ngọzi kasịnụ m nwere maka ozi ntanetị.
Ndị ahịa dị mkpa n'ozuzu ha nwere ike ịnwe ọtụtụ uru dị ukwuu n'akụkụ akụkụ ndị ahịa ha, ọkachasị mgbe enwere ọtụtụ data, nke na-eme ma karịa ọghọm ya iji mee ka ha baa uru. Anaghị m ekwu n'okwu ọ bụla na nke a bụ eziokwu, mana m kwenyere na nke a bụ otu n'ime ha. Dịka m kwuru, m ka ga-ahụ ịhụ usoro ngwakọ zuru ezu (HTML5 ga-abụ naanị ele mmadụ anya n'ihu) emere nke na-enye onye ọrụ njedebe ikike ịchịkwa ya na ikike ị ga-eji mee ihe abụọ mana ndị ahụ bụ ọtụtụ ọrụ maka abụghị uru dị ukwuu na ndị anyị ga-eleba anya na ha mejuputa ha nwere ike ọ gaghị egbu oge ha mgbe ha chere na onye ahịa ha zuru oke dịka ọ dị.
Aug 17, 2010 na 5:13 PM
Nchọgharị kwesịrị ịdị ngwa ngwa na igwe mpaghara karịa igwe dị anya. Ọ bụ eziokwu na igwe dịpụrụ adịpụ nwere ike ịkọwa ngwa ngwa (ebe ọ nwere ike ịbụ ụyọkọ igwe), mana ihe na-egbochi bụ bandwit, ọ bụghị ike nhazi.
Dị ka ihe atụ, ọ na-ewe Google Desktọpụ m ihe dịka 0.19 sekọnd iji chọọ ihe 262,000. Enweghị m ike ịnweta GMail iji kọọ oge ọchụchọ ahụ, mana nchọta ọhaneze Google ọ bụla na-ewe opekata mpe 0.27. Nke ahụ nwere ike ịbụ ọtụtụ ijeri ntinye, mana ọ bụ ọtụtụ puku kọmputa. Mana ka anyị chee na nsonaazụ m enweghị atụ, yana ị nwere ike ịnweta, kwuo 10x ọsọ ọsọ site na nchọta dịpụrụ adịpụ. Ya mere, anyị ga-elele ntụnyere nke 0.19 sekọnd na ọsọ ọsọ 0.019.
Remote nyefe nke data chọrọ oge. Maka m ịkwaga data n’etiti onye na-achọ ihe dịpụrụ adịpụ na igwe m, enwere ihe nhịahụ na bandwidth. M chụpụrụ usoro iheomume na Ngwaọrụ Mmepụta nke Google Chrome, na site na ịpị bọtịnụ "Ozi Ọchụchọ" na-enweta nzaghachi ka 0.50 sekọnd.
Ime Ime: 0.50 s (nkwụsị) + 0.019 s + Oge ịnyeta = 0.519 sekọnd
Ọchụchọ mpaghara: 0.19 s + Oge ntinye = 0.19 sekọnd
Ga-achọpụta na n'omume m, ọ nweghị mkpa otu esi achọ ngwa ngwa. O nwere ike ịbụ 100x ma ọ bụ 1000x ma ọ bụ ozugbo, ọ ka ga-ewe ogologo oge ịfefe karịa ịchọ mpaghara.
Ama m na odi ka anyi na-ekewa ntutu. Kedu ihe dị iche na ọkara nke abụọ na otu ụzọ n'ụzọ iri nke abụọ?
Azịza ya bụ: otutu.
Aug 17, 2010 na 6:25 PM
Echere m na anyị anaghị ekwu okwu banyere nyiwe a kapịrị ọnụ? Igwe desktọọpụ Google abụghị onye ahịa ozi oge ikpeazụ m lere ya anya, na ọ bụ ihe atụ nke etu ngwa ngwa ụfọdụ ihe nwere ike ịbụ, ọ naghị agbanwe na na omume desktọọpụ ndị ahịa anaghị eme nke ọma, dị ka ha abụọ kwuru ahụmịhe m na Doug na ha, anụbeghịkwa m na onye ọ bụla mere nke ọma karịa ya. Ihe omuma a na-eme adighi eme ka ihe gha aka mmeri ma oburu na odighi onye ghaaru nso inweta ha.
Ma nke a bụ arụmụka dị mkpa amaokwu dị mkpa. Amaghị nke ọma mgbe ahịrị koodu ghọrọ ihe akọwapụtara maka ma ihe dị gịrịgịrị ma ọ bụ sie ike ka ọ bụrụ ebe ọzọ ka ebuli ihe dị elu. Ọ bụ ezie na ndị ahịa weebụ na-ebuwanye ibu na HTML5 ọ dịghị agbanwe agbanwe na ha ka dị gịrịgịrị na imirikiti ọrụ ka na-ezube ka sistemu dịpụrụ adịpụ ga-arụ mana ugbu a site na obere enyemaka na mpaghara mgbe enwere ike.
Nke ederede mara mma, ebe oge m gmail yiri nke gị, ngwa Google m maka ngalaba gị gbara gburugburu 125-150ms.
Dị ka m kwuru, e nwere uru na ọghọm ma ma na-ekwu “Desktop email enweta nkwanye, aka ala!” bụ naanị ụzọ mgbe ọ bịara n'iji ojiji na iji ikpe.
Aug 17, 2010 na 7:51 PM
Enwere ike iji desktọọpụ Google chọọ ebe nchekwa ederede mpaghara. M na-eji ya (ma jiri ya na nha m dị n'elu) iji chọọ ụlọ ahịa akwụkwọ ozi m na ọ dị oke ọsọ.
Na ahụmịhe nke m, ndị ahịa desktọọpụ na-agba ọsọ ọsọ karị, ntụkwasị obi, na-agbanwe agbanwe ma nwee atụmatụ ka mma n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'akụkụ niile. Nanị ihe dị iche bụ na ị nwere ike ị nweta onye ahịa weebụ site na kọmputa dị iche iche, nke bụ ezigbo ihe mere ị ga-eji nweta ozi gị site n'aka otu n'ime ndị ahịa a ma mee ka ọ mekọrịta ya na ebe abụọ ahụ.
Echere m na maka ndị ahịa anaghị eji AJAX eme ihe, ị nwere ike ịrụ ụka na onye ahịa ahụ dị gịrịgịrị. A sị ka e kwuwe, ihe nchọgharị ahụ n'okwu ahụ na-egosi ibe peeji, ma sava dịpụrụ adịpụ na-ekpebi ihe ọ ga-egosi. Ma ọ bụrụ na ị na-ebufe ọkara nde akara nke koodu na kọmputa ndị ahịa maka ya imezu, ọ dị ka akara ahụ opekata mpe ịmalite. Nke a abụghị ụbọchị ochie nke X Windows, ebe ọnụ gị nwere ike ịbụ ezigbo "ogbi ọnụ." N'ezie, ọ bụ ihe nchọgharị na-eme ka ọtụtụ ihe dị elu. Nke a gosipụtara site n’eziokwu na ị gaghị agba ọsọ Gmail n’ime ihe nchọgharị ochie na-enweghị ịgbanwere “ihu HTML dị larịị.”
Naanị ihe dị egwu enwere m ike ịhụ na ndị na-ahụ maka ozi desktọọpụ (ma ọ bụ nke ọma) bụ ịnweta ozi gị mgbe ịnweghị kọmputa gị. Ma ebe ọ bụ na ọ nweghị ihe kpatara na ịgaghị enwe ozi ntanetị weebụ ọ bụrụ na enwere m, echere m na nke a abụghị nke ọghọm.
Isi okwu nke post m bụ igosi na ọtụtụ nde mmadụ na-eji ozi ịntanetị naanị, n'agbanyeghị na enwere nnukwu uru dị na iji onye ọrụ desktọọpụ dị ka isi ozi izizi gị. Echere m na emeela m ka o doo anya na uru ndị a karịrị naanị uru nke email dị na weebụ: nnweta site na kọmputa agbaziri agbaziri. Achọpụtakwala uru ndị ọzọ achọpụtara, dịka nchọta na nchọta ngwa ngwa.
Ya mere, m na-eguzo n'akụkụ nkwupụta m: "ndị ahịa email desktọọpụ meriri aka!" 🙂
Aug 18, 2010 na 1:55 PM
Ekwenyere m na Doug, nchọpụta adịghịzi na Outlook (ọ bụghị n'aka ndị ọzọ). Google yiri ka ọ na-edepụta ma na-enyocha ala, ebe, oge ọ bụla m na-eme ka ịdebanye aha na desktọọpụ m na-enwe olileanya na ị ga-achọ usoro ọchụchọ ahụ, tankị arụmọrụ m niile. Ọ dị ka Google nwere ike ịnwe ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ karịa m, gaa na ọgụgụ. 🙂
Lee anyị nọ na 2011, na ihe niile ma gị arụmụka paranoia adịkwaghị agbapụta:
Speed: Gmail dị ngwa karịa Outlook n'ịkwụnye ụgwọ, dị ka ngwa ngwa na njikwa akwụkwọ
Oge: Gmail na-enye ike niile ikwuru na-efu efu
Atụmatụ: Gmail nwere ihe nkwụnye ihe nchọgharị ActiveInbox nwere ike
Onye ọrụ nwere ike kagbuo zipu ma gaa n'ihu tupu mgbakwunye mgbakwunye ezuola
Nwere ike ịhazi na ịdọrọ na dobe
Ike ọkọlọtọ maka nsonye
Nwere ike ịtọ iwu
Nwere ike itinye ndetu
Nwere ike ịhụ mkparịta ụka mkparịta ụka ma ọ bụ ozi ọ bụla
Ihe ndị a dị mma karịa atụmatụ email desktọọpụ? mba. Hà ha nhata na ngwa ngwa iji hapụ nsogbu nke iji ohere disk mpaghara, wdg? Eeh.
Amaghị m ihe kpatara na onye ọ bụla nwere njikọ Internetntanetị na-adịgide adịgide ga-eme ihe ọ bụla KWES useR use jiri usoro ihe nchọgharị siri ike, dị ka Gmail + ActiveInbox
Mee 19, 2011 na 1: 29 AM
Ekwenyere m na nyocha gị nke Gmail. Onye ọrụ desktọọpụ m dị ka ọ dị ntakịrị dinosaur ma e jiri ya tụnyere Gmail, ọkachasị na njirimara. Otú ọ dị, m ka na-ahọrọ ya.
Ọkt 19, 2011 na 2:58 PM
Enwere ọdịiche dị n’etiti atụmatụ na erughị eru.
Dịka ọmụmaatụ, Gmail enweghị ụdị ụbọchị ọ bụla. Nye m, nke ahụ bụ nzuzu. Mana enweghị ihe kpatara nka Gmail enweghị ike ime nke a. Enweghi ike ikwu okwu banyere ụdị atụmatụ ndị a, ebe ha bụ naanị mmasị.
Agbanyeghị, enwere ụfọdụ ihe ị na - agaghị emeli nke ọma na ndị na - enweta ozi email nke weebụ. Otu ihe atụ bụ njegharị data. Onye ahịa desktọọpụ na-echekwa email gị n'ezie na mpaghara, nke na-eme ka o doo anya na ụfọdụ ndị na-eweta igwe ojii enweghị ike ihichapụ ya na mberede. Nke a abụghị a “atụmatụ” nke desktọọpụ email dị ukwuu dị ka ọ bụ mmachi nke web-dabeere email.
M nọnyeere onye edemede ahụ. Ka m gbalịa ịkwado ya site na echiche 2011.
Kwetara. Gmail dị ezigbo mma mgbe ọ ruru ya. Mana enwere ụzọ nke ozi desktọọpụ na-akụ ya. Ikekọrịta ịntanetị maka otu ihe. Ọ bụ ezie na ọ na-adịwanye ọhụrụ ị nwere ike ịghọta ọdịiche ọ ga-eme mgbe ahụ. Ọzọkwa, m ga-asị na gmail dị ọsọ ọsọ ma ọ bụrụ na ị na-agụ otu ozi ma ọ bụ abụọ n'otu oge. Ma mee ya 20 ma ọ bụ 30 ma ọ bụ 50 na desktọọpụ mara mma nke ukwuu. Naanị ị na-agbanye ala ma ị na-edezi ugbu a dị ka ịgụ mgbe ị na-elele / ịgụ n'otu oge. Maka ozi ma ọ bụ abụọ, echere m na gmail bụ mmeri.
Gmail kwetara emeela ka akụkụ nke mbụ dị mma. Mana, achọrọ m ma ọ bụrụ na ọ bụ naanị m, ana m ahọrọ pịa nlekọta na-eziga ozi nke desktọọpụ na-enye. Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na gmail ma ọ bụghị nke ọma. Maka akụkụ anọ nke anọghị n'ịntanetị, ọ ka na-adị mma belụsọ ma i jiri googles offline offline nke m na-anaghị eme. Mana nke ahụ na-eme ka akara dị n'etiti desktọọpụ na ozi ntanetị.
Aghọtaghị m otu ị si ekwu web / gmail nwere njirimara ka mma. Ọ na-agbadata n'ihe m bu n'uche
Na-agbanye mgbe ọ bụla (Echere m !!)
Mee 19, 2011 na 1: 25 AM
M na-ahọrọ ndị ahịa email desktọọpụ ọ bụ ezie na ekwenyeghị m na Gmail anaghị eti ndị ahịa desktọọpụ aka na njirimara (enwere ọtụtụ karịa karịa akpọtụrụ n'isiokwu a, dịka ijikọ na Google Docs dịka ọmụmaatụ).
Echere m na ihe kachasị mma nke ndị ahịa desktọọpụ bụ na ha na-ekwe ka inwusi igbe ozi email site na ngalaba dị iche iche (dị ka, adreesị ozi-e ọkachamara) n'ime otu homogen, njirimara enyi na enyi ebe enwere ike ịdọrọ ozi ịntanetị n'etiti igbe ma hazie n'otu nchekwa ahụ wdg. na ozi ịntanetị bụ ụlọ ahịa na-anọghị n'ịntanetị, dịka e kwuru.
Enwere m ajụjụ dị mfe gbasara ndị ahịa desktọọpụ nke ọ na-enweghị onye nwere ike ịza, yabụ m ga-anwale ebe a
- Enwere ike ịtọlite ​​ndị ahịa email desktọọpụ abụọ nwere otu adreesị ozi-e?
Ka anyị kwuo na anyị nwere e-ụlọ ahịa na anyị abụọ chọrọ ịnata ozi nkwado ndị ahịa na ndị ahịa email desktọọpụ anyị, yana o doro anya na anyị nwere naanị otu adreesị ozi-e nkwado nke edobegoro, anyị nwere ike ịtọ ya yana ndị ahịa desktọọpụ?
Ekwetaghị m na anyị bụ naanị ndị mmekọ azụmaahịa ụwa chọrọ ime nke ahụ, yabụ gịnị kpatara na enweghị onye ga-aza?
Ndị ahịa anyị na desktọọpụ bụ MacMail na Outlook 2007, ọ bụrụ na nke ahụ dị iche. Okwesighi, Echere m, ebe ọ bụ na edoziri adreesị ozi-e n'ime ndị ahịa desktọọpụ ọ bụghị na ngalaba nchịkwa e-ụlọ ahịa. Ọ bụ ya mere m ji chee na ọ ga-adị mma ịme nke ahụ?
Ajuala m e-store's 'Personal service service consultant' ugboro ugboro banyere nke a. Ọ bịara na azịza ole na ole na-enweghị isi ma kwuo ugbu a na m 'ga-achọ ịkpọtụrụ Apple, ma ọ bụ Microsoft maka atụmatụ dị elu'… Rubbish.
M zigakwara ajụjụ ahụ Ebe a (na Quora) na na Twitter ọtụtụ oge, enweghị nzaghachi ruo ugbu a.
Enwere m ike ịnwale ma lee ma ọ na-arụ ọrụ. Agbanyeghị, onye ọchụnta ego m abụghị teknụzụ ọgbara ọhụụ ma ana m atụ anya na m ga-enyere ya aka ịtọlite ​​email ahụ na Outlook ya mgbe ọ laghachiri. Ya mere, ọ ga-amasị m ịmara tupu ma ọ ga-ekwe omume ịkekọrịta adreesị ozi-e ahụ dị ka anyị chọrọ, yabụ na m nwere ike wee chepụta echiche ọzọ tupu ị ga-elerukwu anya na ya mgbe ọ naghị arụ ọrụ.
Mee 19, 2011 na 1: 28 AM
Ọ bụrụ n'iji IMAP mee ihe karịa POP, onye ahịa gị ga - emekọrịta karịa
budata. M na-eji IMAP na Google Apps ma nwee ndị ahịa 4 dị iche iche
ngwaọrụ enweghị nsogbu.
Mee 19, 2011 na 1: 52 AM
Douglas, ejighi m n'aka na m nọnyeere gị. Nke ahụ ọ bụ ee, ọ bụrụ na anyị ejiri IMAP kama POP? Anyị enwere ike iji IMAP na MacMail na Outlook?
Enwere m ike iji ngwa ọ bụla. Agbanyeghị, ọ masịrị m ịnọnyere MacMail n'ihi na nke ahụ bụ ihe m na-emebu na n'ihi uru ndị a kpọtụrụ aha n'elu :-)
Onye mụ na ya na-azụ ahịa nwere ike iji Outlook naanị. Na-agbanwe ngwa. abụghị nhọrọ. Ọ bụ onye maara ihe nke ọma, nwee ahụmịhe ma nwee njikọ chiri anya, mana ọ na-emetụ kọmputa aka mgbe ọ bụla ọ nwere. Ọ chọghị iwepụta oge rụpụta otu esi eji sistemu amaghị. Ya mere, m ga-edozi email nkwado anyị na Outlook maka ya na interface ga-abụrịrị 100% azụmahịa dị ka ọ dị na mbụ.
Mee 19, 2011 na 1: 58 AM
Ee, IMAP na-arụ ọrụ dị ukwuu na MacMail! Fọdụ ọrụ na-akwado POP, agbanyeghị.
Mee 19, 2011 na 2: 09 AM
Ya mere nzaghachi gị bụ: EE, ọ ga-ekwe omume ịnweta ndị ahịa email desktọọpụ anyị melite na otu adreesị ozi-e n'otu oge ahụ, ọ bụrụ na anyị ejiri IMAP kama POP?
Nke ahụ ọ bụ ihe ị na-ekwu?
Mee 19, 2011 na 2: 53 AM
Ee, kpam kpam. M na-eme ya kwa ụbọchị!
Mee 19, 2011 na 2: 00 AM
Ọma achọrọ m ịnata ozi-e nkwado yana onye ahịa m desktọọpụ (esetịpụla nke ahụ ma ọ na-arụ ọrụ zuru oke) dịka ekwuru, n'akụkụ akaụntụ email m ndị ọzọ na interface MacMail m. Nke ahụ bụ ihe ndabere maka ajụjụ m.
Enwere m ike ịnweta ozi ịntanetị na akaụntụ gmail m na nke onye ahịa desktọọpụ m mana enweghị m ike ịzaghachi ajụjụ ndị ahịa m na-esite na desktọọpụ m ma ọ bụrụ na edozighi ya nke ọma. Ajụjụ a abụghị otu esi edobe ya (nke ahụ dị mfe) mana ọ ga - ekwe omume ịnweta ndị ahịa email desktọọpụ 2 anyị nwere otu adreesị ozi-e.